Myanmar Permanent Representative deliveredastatement in response to the oral update of the High Commissioner on Human Rights at the Human Right Council in Geneva – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar Permanent Representative deliveredastatement in response to the oral update of the High Commissioner on Human Rights at the Human Right Council in Geneva
(Geneva, 12 July 2019)
The Permanent Representative U Kyaw Moe Tun deliveredastatement in response to the oral update on Myanmar by Deputy High Commissioner for Human Rights at the on-going 41st Session of the Human Righs Council in Geneva.
He reiterated the government’s efforts including setting up of the Central Committee, establishment of Dr. Kofi Annan’ Advisory Commission on Rakhine State, implementation of the recommendations and progress achieved despite challenges andaseries of ARSA terrorist attacks, as well as concrete steps taken to create conducive condition for returnees.
Responding to some critics citing little or no effort by the Myanmar government to create conditions for voluntary, safe and dignified return of displaced persons, the Permanent Representative urged them to assess the situation objectively and impartially. He expressed the government’s concern over the possible disastrous effect of monsoon season on displaced persons and reiterated Myanmar’s readiness to receive verified returnees as bilaterally agreed in the Arrangements. He expressed his hope for successful repatriation in an amicable manner in accordance with the bilateral Arrangements and emphasized the imperative need of genuine and sincere cooperation and stressed the need to avoid misusing international platforms including the UN to pressure on Myanmar.
He called upon the international community to join hands with Myanmar inaconstructive and sincere way to findasustainable solution towardsapeaceful, stable and prosperous Rakhine State and concluded by stressing that progress in every field will not be possible overnight, but the work by the current government in the past3years has achieved wide ranging and durable impact on the ground.
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲ၌ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ခြင်း
(၁၂-၇-၂၀၁၉ ရက်၊ ဂျီနီဗာမြို့)
ဂျီနီဗာမြို့၌ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ (၄၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ကာလအတွင်း ၁၀-၇-၂၀၁၉ ရက်၌ ပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးကိုယ်စား ဒုတိယမဟာမင်းကြီးက နှုတ်ဖြင့် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပသည်။
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လူမျိုးပေါင်းစုံနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးတို့တွင် မျှတမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုတို့သည် အရေးကြီးကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အတည်မပြုနိုင်သည့် စွပ်စွဲချက်များအား လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ အစီရင်ခံစာများတွင် ဖော်ပြပါရှိနေခြင်းကို စိုးရိမ်ကြောင်း၊ လက်ရှိအစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အရေးကြီး ဦးစားပေးကိစ္စရပ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဗဟိုကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊ ဒေါက်တာကိုဖီအာနန်၏ အကြံပေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း၊ အာဆာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ အပါအဝင် စိန်ခေါ်မှုများရှိသော်လည်း ၎င်းအကြံပြုချက်များကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နေမှုများ၊ ရရှိတိုးတက်မှုများ၊ နေရပ်ပြန်လာမည့် သူများအတွက် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုလည်း ထပ်လောင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နေရပ်စွန့်ခွာသူများ မိမိဆန္ဒအလျောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနှင့် လုံခြုံမှုရှိစွာ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေးကိစ္စတွင် မြန်မာအစိုးရမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု နည်းပါးကြောင်း (သို့မဟုတ်) ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု မရှိကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုနေခြင်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျဖြင့် ရှုမြင်သုံးသပ်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအပေါ် မုတ်သုံရာသီကြောင့် ကျရောက်နိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်ပါကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်လက်ခံရန် အသင့်ဖြစ်နေကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်များနှင့်အညီ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း၊ စစ်မှန်သောစိတ်ရင်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဓိကလိုအပ်ကြောင်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာများ (International Platforms) ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံပေါ် ဖိအားပေးမှုများကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရန်လိုကြောင်း အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လကုန်တွင် မြန်မာဘက် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များ ကော့ခ်ဘဇားသို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားရှိမှု၊ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား အချက်အလက်များ ဖြန့်ဝေရေးနှင့် နေအိမ်များ တည်ဆောက်ရေးတွင် ခင်မင်ရင်းနှီးသောနိုင်ငံများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မြန်ဆန်ထိရောက်သည့် စီမံကိန်းများ (Quick Impact Projects) တွင် UNDP နှင့် UNHCR တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အာဆီယံ AHA Centre နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပါအဝင် မြန်မာဘက်မှ ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများကိုလည်း ကောင်စီသို့ အသိပေးပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ကော့ခ်ဘဇားသို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ခရီးစဉ်အတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရရှိလိမ့်မည်ဟု မြန်မာအနေဖြင့် မျှော်လင့်ကြောင်း အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ခိုင်မာသည့် သက်သေအထောက်အထားများရှိပါက အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ယင်းကော်မရှင်သည် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတည်းက ကော့ခ်ဘဇားသို့ သွားရောက်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်သို့ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့သော်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ ယခုအချိန်အထိ အကြောင်းပြန်ကြားမှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသေးကြောင်း၊ ကောင်းမွန်သော အစီရင်ခံစာတစ်ခု ထွက်ရှိရန် ကော်မရှင်အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လိုကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ကြ ရသည့် အသိုက်အဝန်းအားလုံးထံသို့ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ ပေးအပ်နိုင်ရန်နှင့် အသိုက်အဝန်းများ အားလုံးအကြား သဟဇာတ ပိုမိုရှိလာစေရေးနှင့် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်ရှိရေးအတွက် နိုင်ငံတော်မှ အရင်းအမြစ်များ အသုံးပြု၍ တစိုက်မတ်မတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပသည်။
အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်က ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ သည် ရှုပ်ထွေးနက်နဲသည့် စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရေးအတွက် အစိုးရအနေဖြင့် ခိုင်မာစွာ ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းက မည်သို့မျှ အကျိုးမဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့် ဖိအားပေးမှုများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့် အပြုအမူများနှင့် အပြုသဘောမဆောင်သည့် လုပ်ရပ်များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါက စိန်ခေါ်မှုများကို ပိုမိုကြာရှည် ဆိုးဝါးလာစေနိုင်သည့်အပြင် ငြိမ်းချမ်းသည့် သံတမန်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများကို သွေဖည်သွားစေနိုင်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်း သာယာဝပြောရေးအတွက် ရေရှည်တည်တံ့သည့် အဖြေရှာမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းမှ အပြုသဘောဆောင်ပြီး စစ်မှန်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် လက်တွဲပါဝင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ နယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံတွင် တိုးတက်မှုများ နေ့ချင်းညချင်း တစ်ပြိုင်နက်ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း အစိုးရ၏ သုံးနှစ်တာလုပ်ငန်းကာလအတွင်း မြေပြင်တွင် တည်တံ့ခိုင်မာသည့် တိုးတက်မှုရလဒ်များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းကို နိဂုံးချုပ်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။